Kalligii Taliyihii hore ee dalka Panama oo geeriyooday | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kalligii Taliyihii hore ee dalka Panama oo geeriyooday
Kalligii Taliyihii hore ee dalka Panama oo geeriyooday
Hogaamiyihii hore ee Jaziiradda Panama, Manuel Noriega, ayaa geeriyooday isagoo jiray da’da 83 sano jir.
Madaxweynaha dalka Panama Juam Carlos Varela, ayaa xaqiijiyay geerida hogaamihii hore ee dalkaasi Panama, waxaana uu Ku geeriyooday cisbitaal uu muddooyinkan Ku xanuunsanayay.
Manuel Noriega, ayaa madaxweyne ka ahaa dalka Panama sanadihii dhexeyay 1983-1989 xilligaa oo ay xukunka ka tureen ciidamo Maraykan ah oo qabsaday dalka Panama.
Noriega ayaa miyir la’aa tan iyo bishii March kadib markii qalliin maskaxda loogaga sameeyay waxana uu u dhintey xanuunkaa ka hayay maskaxda sida ay sheegayaan ilaha Caafimaad ee Jazeeraddasi yer.
Hogaamiyihii hore ee Milatariga ahaa Noriega ayaa markii hore waxa uu gacan saar la lahaa dowlada Maraykanka isagoo si hoose ugu shaqeynayay laanta sirdoonka ee CIA kahor inta uusan la wareegin xukunka dalkiisa.
Hase yeeshee markii uu noqday hogaamiyaha dalka Panama ayuu ka soo horjeestay siyaasadii Maraykanka taasina waxa ay sababtay in aakhirkii ay ciidamada Maraykanka soo farogeliyaan xukunkiisa kana soo qabtaan caasimada dalkiisa.
waxaa Maxkamad ku taal dalka Maraykanka ay ku xukuntay 17 sano oo xarig ah.
Dowlada Maraykanka ayaa ku eedeysay Noriega uu ahaa hogaamiye awood badan islamarkaana uu caawinayay ururada ka ganacsada daroogada ee loo yaqaano ‘Drug Dealers’ iyo in uu weliba ku kacay falal qaarijin ah.
Xukunka markii uu soo dhamaystay sanadkii 2007-dii ayay dowlada Maraykanka ku wareejisay wadanka Faransiiska halkaa oo maxkamad ku taal magaalada Paris ay ku xukuntay 7 sano xarig ah oo dheeraad ah.
Dowladda Panama ayaa markale ku xukuntay 40 sano oo xarig ah isagoo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo qorsheyn dilal siyaasadaysan oo ka dhacay dalkaasi.
Panama waa Wadan lagu tiriyo inuu ku yaalo Waqooyiga America ama Bartamaha America, waxaa uu dhanka galbeed xad kala leeyahay dalka Costa Rica, waxaana Colombia uu xudduud kala leeyahay dhanka Koonfur-bari, isagoo Badda Caribbean-kan kaga yaala dhanka Woqooyi waxaana dhanka Barri kaga yaalaa Badda Caalamka ugu wayn Pacific Ocean. Dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 million, kala bar waxaa ay Ku nool yihiin Caasimadda Dalkaasi ee Panama City.
Previous articleCiidanka Xasalinta Caasimadda oo la dagaalamay ciidan hub ku dhex watay Magaalada Muqdisho
Next articleMadaxwaynayaasha Galmudug iyo Puntland oo baaq nabadeed si wadajir ah usoo saaray: Sawiro